၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို 2015 - သတင်း Rule
၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို 2015
သင်းနှင့်တံစဉ်များကို မှစ. Lara Croft Go ကိုမှ, Alphabear နှင့် Minecraft: ပုံပြင် Mode ကို, ထို 25 ယခုနှစ် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “2015 ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 24 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 08.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ရှေးရှေးတုန်းက, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဂိမ်းရောက်လာသောအခါ Android ဖုန်းကိုမကြာခဏ iOS ကိုမှဒုတိယဆော့ကစား. ဒါကရှည်လျားသော်လည်းသွားပြီင်: 2014 အန်းဒရွိုက်ဂိမ်းတစ်ခုခြွင်းချက်တစ်နှစ်ခဲ့, ဒါပေမဲ့ 2015 ကိုယ့်အဖြစ်ကောင်းသည်.
'' em ups နှင့်ပင်အမာခံအွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းရိုက်ကူးဖို့ပလက်ဖောင်းနှင့်ပဟေဠိဂိမ်းထဲကနေ (multiplayer အွန်လိုင်းစစ်တိုက်နယ်ပယ်တွင်) ခေါင်းစဉ်, Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေကနေရှေးခယျြဖို့အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ roundup င် 25 အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်, ပိုမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအတွက်အကြံပြုခံရဖို့နှင့်အတူ.
iOS ကိုရှေးခယျြသင့်မိုဘိုင်းဂိမ်းပလက်ဖောင်းသည်ဆိုပါက, သီးခြားရှိပါတယ် 2015 သည် roundup, သင်ဒီမှာတှေ့နိုငျသော.
ဒါကြောင့်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့လွဲချော်ရပြီ? အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လွတ်လာသူမြား - အမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအထက်ပါဂိမ်းနှင့်အခြားခေါင်းစဉ်အဘို့သင့်အကြံပြုချက်များပေါ်တွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖွင့်သည် 2015, သငျသညျစိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်.
25. စတီဗင်ဠာ RPG - အလင်းတိုက်ခိုက်
ထိုကာတွန်းကွန်ယက်ပြပွဲစတီဗင်ဠာအပေါ် အခြေခံ., ဒီရေတွင်းတစ်တွင်း-လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် RPG အဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တန်ရာအပေါ်ရပ်တည် - ပြပွဲ၏ပရိသတ်များက၎င်း၏သွန်းထံမှဇာတ်ကြောင်းပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း. ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်လွှမ်းမိုးသော feeling မပါဘဲလေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, စစ်တိုက်ခြင်းငှါစက်ပြင် touchscreen က့ညာဘက်နေစဉ်.
24. MOS ဗီဒီယိုဂိမ်းမှတ်တမ်းများ 2
မိုဘိုင်းပေါ်မှာဤအမျိုးအစားဖြစ်သည်အဘို့ခိုင်ခံ့သောနှစ်တွင်ဘာအတွက်နောက်ထပ်ပလက်ဖောင်းဂိမ်း. ဒီအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အဖြစ်ဂရုတစိုက်သင်ကြိုက်သလောက်အဖြစ်ကစားခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ pixel-စုံလင်သောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျအဆုံးစွန်သောရှေးခယျြလျှင်စူးစမ်းဖို့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအများကြီးနှင့်အတူ. slick ထိန်းချုပ်မှု, ကောင်းစွာအကောင်အထည်ဖော်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အချို့သောအလွန်ရီစရာဝတ်စုံသင်၏မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုထားမည်.
23. PewDiePie: အ Brofist ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး YouTubers ကိုတယောက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကဒီဂိမ်းဟာငွေသား-In များအတွက်စာရွက်တူထင်ရစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမဲ့ဒီဒါပေမယ့်ဘာမှခဲ့သည်. အ Brofist ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများဂိမ်းသမိုင်းမှ သိ. ကိုးကား၏စာရေးတစ်ဦးကောင်းစွာ-လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် platform ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအစအစားသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထက်သင်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှီခိုစေသည် (In-app ကိုဝယ်ယူဘို့) တိုးတက်မှု.
22. အဆိုပါ Trace: လူသတ်မှုနက်နဲသောအရာဂိမ်း
သင်တစ်ဦး whodunnit ရာဇဝတ်မှုဝတ္ထုချစ်ကြလျှင်, အဆိုပါ Trace မိုဘိုင်းဂိမ်း form မှာကအနီးဆုံးအရာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျစုံထောက်ကစားရန်ရှိသည်, သဲလွန်စရှာဖွေနေ, သက်သေအထောက်အထားများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနှင့် brooding လူသတ်မှုမြင်ကွင်းများပတ်ပတ်လည်လှည့်လည် (optional ကို). အဘယျသို့ဒါပျော်စရာက storyline အရည်အသွေးမြင့် TV ကိုရာဇဝတ်မှုပြဇာတ်နှင့်အတူတန်းတူအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်.
21. Star Wars: သူရဲကောင်းများ၏ဂလက်ဆီ
လစဉ်လတိုင်းအတွက် 2015 သစ်တစ်ခု Star Wars မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုရောက်စေဖို့သလိုပဲ, ကောင်းသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်. ဒီပရိတ်သတ်တွေအများဆုံးသဘောကျလိမ့်မည်ဟုတ: Star Wars ရဲ့အမျိုးမျိုးသောခေတ်မှဇာတ်ကောင်စုဆောင်းတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်အတူကောင်းစွာဒီဇိုင်းအရေးယူမှုဂိမ်း, ပြီးတော့စကြဝဠာထဲကတိုက်ဖျက်ဖို့အသင်းများသို့သူတို့ကိုငါဖွဲ့စည်း.
Star Wars: သူရဲကောင်းများ၏ဂလက်ဆီ
20. မှောင်မိုက်: Echo
ကျနော်တို့ရှေ့တော်၌စမတ်ဖုန်းများအပေါ် Papa Sangre တူအသံသာဂိမ်းကိုမြင်ရပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားသည်, သငျသညျလုပ်အသံအပေါ် အခြေခံ. ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြသရန် "အသံမြင်" ကိုအသုံးပြုခြင်း. သူတို့အားအသံလည်းဆွဲဆောင် မှလွဲ.… ကောင်းစွာ, ကျွန်တော်စာကိုလုယူမည်မဟုတ်. သို့သော်ဤသငျသညျတညဉျ့မှာနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ဦးတည်းဆော့ကစားချင်ပါလိမ့်မယ်ဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာသင့်ဆိုဖာထဲကခုန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
19. ပင့်ကူး: အ Shrouded မွန်း၏ရိုးထုံးတမ်းစဉ်
2009 ခုနှစ်ရဲ့ရန်နောက်ဆက်တွဲ (ဆဲရကျိုးနပ်ထွက်စစ်ဆေးနေ) ပင့်ကူး: Bryce Manor ၏လျှို့ဝှက်ချက်, ဒီကပိုရှစ်အတော်များများကမျက်စိပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်သည်, သငျသညျအင်းဆက်ပိုးမွှား trapping နှင့်တစ်ဦးသဘာဝလွန်ပုံပြင်ဖုံးကွယ်တစ်ဦးစွန့်ပစ်အိမ်ကြီးစူးစမ်းအဖြစ်. တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်၏တစိတ်တပိုင်း (တံစဉ်များကိုတူဂိမ်းတွေနဲ့အတူနှင့်မီးပြတိုက်အောက်ဖက်) လျော့နည်း frenetic ဦးနှောက်-န့်အဘို့.
ဒါဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဂိမ်းရဲ့, ဒါပေမဲ့သင်၌မော်ကွန်းတိုင်အမှတ်ချိုင့်ကိုချစ်သောလျှင် 2014, ထို့နောက်အဆိုပါမီးပြတိုက်အောက်ဖက်သင်၏နောက်ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဒါဟာမီးပြတိုက်ကိုအောက်တွင် ထား. တစ်ဦးပဟေဠိဂိမ်းရဲ့, သငျသညျမိမိအဆုံးရှုံးခဲ့ရအဘိုးရန်သင့်လူငယ်သူရဲကောင်းရဲ့လမ်းကိုရှာဖွေစက်မှုရထားဘီးလှည့်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာ. ဒါဟာတောက်တောက်နဲ့ရောင်စုံင်, နှင့်သင်၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်.
17. ခရစ်ကက်ကပ်ထားပါ 2
အဖြစ်တာရစ်သမ်-action ကိုဂိမ်းအားကစား sim အဖြစ်, ခရစ်ကက်ကပ်ထားပါ2သငျသညျပြိုင်ဘက်တစ်ဦးအကွာအဝေးဆန့်ကျင်လေးနှင့် Sixes hoicking ဖြစ်ပါတယ်, ဿုံ stripped-down ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တောက်ပ-ချောမွေ့ကာတွန်းနှင့်အတူ. Android ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအပုရစ်ဂိမ်း, သို့သော်၎င်း၏စက်ပြင်ကပိုပေါ့ပေါ့ပရိတ်သတ်တွေအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခရစ်ကက်ရိုက်ကူးဖို့အယူခံလုပ်သင့်တယ်.
16. ထပ်မံကျ Shelter
၏အဆုံးအားဖြင့် 2015, ထပ်မံကျပရိတ်သတ်တွေထပ်မံကျကစားခဲ့ကြ4သူတို့ရဲ့ consoles စပေါ်. သို့သော်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်သည်အထိ, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်ထိပ်တန်းထစ်ဂိမ်း - မိုဘိုင်းဂိမ်းထပ်မံကျ Shelter သူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ထဲမှာဝစွာ-ခဲ့သည်. ဒီဂိမ်းဟာသင်တစ်ဦးခေတ်လွန် Apocalyptic အမိုးအကာမြေအောက်ပြေးရှုမြင်, တစ်ဦးဓါတ်ရောင်ခြည်-dodging The Sims တူ.
ဒါ့အပြင် Android ရဲ့တိရိစ္ဆာန် Crossing အဖြစ်လူသိများ, ပိုပြီးပင်လယ်ဓားပြများနှင့်အတူဆိုသော်ငြား. ဒီနည်းနဲ့သင့်ဇာတိမြို့ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးဖို့ Quest များတစ်စီးရီးအပေါ်မြင့်သမုဒ်ပင်လယ်ကူးခဲ့, တစ်ဦးယာဉ်အမှုထမ်းတည်ဆောက်စဉ်, ငါးမျှားနှင့်ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ array ထဲကအကူညီခြင်း. သူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုလိုပဲ, ကထွက်ရှိသောနေ့စဉ်ပြဇာတ်အတိုကွဲကိုက်ညီရဲ့.
သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းတစ်ဦးမယ့်-အပ်လိမ့်မည်ဟုနောက်ထပ်ဂိမ်း, ဒီမြို့ကိုဝိုင်းအောက်မှာတစ်မြို့အတွက်အရပ်သားတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကစားစစ်ပွဲဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏ပုန်းခိုနေသောနေရာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိမြို့လမ်းမ၌ foraging အကြားသင်၏အချိန်ခွဲထွက်လိမ့်မယ်, တချို့နှင့်အတူ အလွန် သင့်ရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်တွင်လူအကြောင်းကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ခဲယဉ်းဆုံးဖြတ်ချက်များ.
ယခုနှစ်အသစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူစမ်းသပ်ကြောင့်နောက်ထပ်ဂိမ်း: ဒီကိစ္စမှာ, အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာပြောင်းလဲဖို့ကာတွန်းရုပ်ပြစာအုပ်၏ပြားစီစဉ်. ဤ, သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်တစ်ဦးခြေချောင်းပုတ်, jazz တေးသံဖြင့်လိုက်ပါသွား. တစ်ကမ်ဘာကွာအတူတူပင်အရွယ်ပွဲစဉ်သုံးပဟေဠိမှ, Frame ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်သိန်းကိုစမ်းသပ်ဖို့နည်းလမ်းသစ်တွေ့ရှိရ.
သူ့ရဲ့ဆွဲဆန် ့. ဦးနှောက်၏သွားလာရင်းခွင့်ပြီးတော့နောက်ကျောကိုရယူရန်အားဖြင့်ပလက်ဖောင်းအဆင့်ပတ်လည်ဦးခေါင်းခွံ pinging ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအလွယ်တကူအကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းယခုနှစ်အတွင်း. မလူစည်ကားအမျိုးအစားဖြစ်သည်, ဝန်ခံရမည်. သို့သော် Skullduggery! တစ်ဦးတီထွင်လှုပ်ရှားမှု-puzzler ဖြစ်ပါသည်, complete with Matrix-esque slowdown as you navigate your way into (and out of) tight corners.
10. Minecraft: ပုံပြင် Mode ကို
7. ဖရက်ဒီရဲ့မှာငါး Nights 4
Nearly four years after its launch, Triple Town remains one of the best mobile puzzlers. တွင် 2015, its developer made an equally-addictive word game, Alphabear, which sees you spelling words from Scrabble-like tiles to earn points – and build cartoon bears. The perfect dip-in dip-out mobile game.
A wonderful idea for anyone who’s ever loved the roleplaying game (RPG) အမျိုးအစားဖြစ်သည်. Evoland starts asatop-down, monochrome adventure but gradually works its way through the genre’s history, ending up with whizzy real-time 3D battling. A gimmick? Thankfully it was backed up by an absorbing game.
There have been excellent mobile versions of Football Manager for several years now, ဒါပေမဲ့ 2015 saw the gap between tablets and the desktop versions of the management sim narrow even further. Not least because of the cloud-save option to play your saved game on either.
Is thisagame, oragardening-themed meditation app? တစ်နည်းနည်းဖြင့်, it was one of the best things to play on Android this year. Described by its developer as “a love letter to trees”, it sees you nurturing yours with gentle touchscreen swipes. The game looks and sounds beautiful: the antidote to your mobile-inbox stress.
• ၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို 2014
• ၏အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများကို 2013
← အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad ဂိမ်းတွေ 2015 အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို 2015 →